I-Disco Ball - Ukubala kwe-NYE kwe-Djs, i-Vjs, i-nightclub 2020
I-Club iphefumulelwe i-DJ video drop, equkethe ama-disco balls kanye nemiphumela ye-mirror. Igama lakho libonakala likhulu futhi liphethe ngakho-ke akukho muntu ozolilahleka.
Yenza ngokwezifiso imibhede yomculo yomsindo xhumana nathi ukuze uthole imininingwane.
SKU: I-DjVidDropsDB Isigaba: Specials Products
Ukudonsa kwevidiyo ye-DJ eyenziwe ngokwezifiso equkethe igama lakho le-DJ. Inkulu njengevidiyo ye-intro intro, njengenguquko phakathi kwamathrekhi noma ukuvala isethi yakho. Yenze ukuba bakhumbule ukuthi ubani ogcina iqembu liletha igama lakho phambili futhi liba ne-DJ yethu yesibindi, yokwakha ama-drops!
Ama-Countdowns womsindo (1)
Ama-Countdowns wevidiyo (1)